Deeqaha Ganacsi ee Gobolka Washington & Deymaha
Bogga ugu weyn|Kobcinta Dhaqaalaha|Deeqaha Ganacsiga & Amaahda
Ikhtiyaarrada Maalgelinta ee Ganacsiyada Yaryar iyo Kuwa Soo koraya
Ganacsiyada yaryar waxay u baahan yihiin raasamaal si ay u koraan. Nasiib darrose, barnaamijyo badan oo amaah ah ayaa loogu talagalay in loogu adeego ganacsiyada waaweyn. Si loo xiro farqiga maalgelinta, Wasaaradda Ganacsiga waxay siineysaa meheraddaada sii kordheysa dhowr barnaamij oo amaah ah oo kaa caawin kara inaad iibsato qalab cusub, cusbooneysiiso, ballaadhiso ama dhisato tas-hiilaad, taageerto horumarinta badeecada marxaladda hore ama dib u soo celinta guryaha laga tagay ama aan loo adeegsan arrimo deegaanka awgood .
Liiska dhameystiran ee fursadaha maalgelinta bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha ee laga heli karo Waaxda Ganacsiga, booqo boggan.
Deeqaha Ganacsiga Yaryar
Si wax looga qabto saamaynta masiibadu ku yeelatay ganacsiyada yaryar ee gobolka oo dhan, Ganacsi ayaa si joogto ah u siiya Washington Working iyo deeqo kale si ay uga caawiso meheradahaas inay soo kabtaan, dib u dhisaan oo dib u bilaabaan.
Dhoofinta Barnaamijka Foojarka
Qeyb ahaan waxaa maalgeliya deeqda Maamulka Ganacsiga Yaryar, Barnaamijka dhoofinta dhoofinta wuxuu ka caawiyaa ganacsiyada yaryar inay dib u dhigaan qaar ka mid ah kharashyada (illaa $ 5,000) ee ka mid noqoshada ganacsiga dhoofinta ama ku sii ballaadhinta suuqyada caalamiga ah ee cusub, sida bandhigga ganacsiga ama ujrada howlaha ganacsiga, safarka ama kharashka shaqaalaynta turjubaano ama turjubaanno.
Guddiga Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada
Kaabayaashu waa qayb muhiim u ah abuuritaanka kobaca dhaqaalaha iyo firfircoonida. Si loo ballaadhiyo loona kobo, ganacsiyada waxay u baahan yihiin jidad, dekado, biyo, awood iyo isku xirnaan. Si loo bixiyo kaabayaashan muhiimka ah, Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada (CERB) wuxuu maalgeliyaa mashaariic kala duwan oo aan kaliya xoojin bulshooyinka ku baahsan gobolka oo dhan, laakiin abuuray in ka badan 34,000 oo shaqo inta lagu gudajiro howshan.
Brownfields Ku Noqoshada Sanduuqa Amaahda
Brownfields waxaa loogu talagalay inay bixiso maalgelinta guryaha u baahan nadiifin ballaaran iyo dib u soo nooleyn sababo faddarayn awgeed. Isbahaysiga Brownfields, oo bixiya ikhtiyaarkan maalgelinta dulsaarka yar, ayaa sidoo kale la shaqeyn kara milkiilayaasha iyo horumariyeyaasha si loo hagaajiyo oggolaanshaha heer maxalli, heer gobol iyo heer qaran.